Kubukeka sengathi ukuhlolwa kweglucose egazini lika-Apple kubucayi | Ngivela kwa-mac
Kubukeka sengathi ukuhlolwa kweglucose egazini lika-Apple kubucayi
I-patent entsha evela ku-Apple ikhombisa ukuthi uhlelo lokuqapha ushukela egazini akuyona nje inhlebo. Kubukeka sengathi bayasebenza ngempela futhi yize siqinisekile ukuthi ngeke kube lula bonke laba bantu abadinga ukuhlola izinga labo le-glucose nsuku zonke bengathola enye indlela enhle kakhulu.
Iqiniso ukuthi amalungelo obunikazi awakwazi ukuba yindawo yokuphenduka futhi abe mancane e-Apple kunelungelo lobunikazi "ngisho nomoya owuphefumulayo" kodwa-ke leli patent elisha elishicilelwe Apple Insider kungashintsha izimpilo zethu ukuqaliswa ngewashi elihlakaniphile elivela enkampanini yeCupertino.
Igunya lobunikazi likhuluma ngemitha engangenisi
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi yonke eminye imisebenzi ayinakuthinteka kulokhu ngakho-ke kuyinselelo enkulu kubo bonke onjiniyela be-Apple ukuyifeza. Kulokhu, zihlobene nemisebe ye-terahertz kagesi kagesi. Ukuchazwa nje kungaba uhlobo lwamagagasi kagesi azokwazi ukukhombisa izinga le-glucose egazini ngenxa yokumuncwa kwezicubu.
Kuzwakala kuyinkimbinkimbi futhi kunjalo. Asikwazi futhi akumele sibe ngaphansi kwemibono ethile mayelana nale patent entsha ngoba isekude kakhulu, kepha uma kungenzeka yenziwe ku-Apple Watch, ibingazukuthola amazinga we-glucose kuphela, izokwazi futhi ukuthola ezinye izimo zesikhumba.
Kubukeka kunjalo I-Apple izimisele ngokusebenzisa lesi sici Futhi yize kuyigunya lobunikazi kuphela, siyethemba ukuthi lena yiyona ogcina ukuyibona ngendlela yangempela kudivayisi ye-Apple. Akungabazeki ukuthi kungaba inqubekela phambili emangalisayo futhi kungagwema ukwenza ukubhoboza noma ukufaka inzwa engaphansi (njengaleyo esivele isetshenziswa namuhla) ukukala leli nani elibalulekile kubantu abanesifo sikashukela.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple Watch » Kubukeka sengathi ukuhlolwa kweglucose egazini lika-Apple kubucayi
Abakwa-Apple bathatha amalungelo e-movie kaDolly abalingisa kuwo uFlorence Pugh
I-Apple Maps izokwengeza imininingwane ngamakhamera wejubane, izingozi neziminyaminya